केही दिन अगाडी चलचित्र कलाकार संघले आयोजना गरेको फान अवार्ड विवादै विवादका बिच सकियो । फान अवार्ड निष्पक्ष भन्दा पनि कलाकार संघले अवार्ड गरेर गलत गर्यो भन्नेहरु धेरै भए । कलाकार संघले आयोजना गरेको फान अवार्डको विवाद विस्तारै सेलाइरहेको अबस्थामा अहिले पहिलो पटक क्यानडामा हुन लागेको “राष्ट्रिय बक्स अफिस फिल्म फेयर अवार्ड २०७२” को चर्चा भने फिल्मी बजारमा गरमागरम छ । पहिलो त अहिले धेरैले यो अवार्ड क्यानडामा गर्नु असम्भब भनिरहेका छन् तर आयोजक संस्था भने गरेरै देखाउने दाबी गर्दै आइरहेको छ । किन पनि यो अवार्ड क्यानडामा गर्न असम्भब भनिएको हो भने क्यानडामा जान भिषा प्रक्रिया सजिलो छैन किनकी क्यानडाको भिषा प्रक्रिया हामीले सोचेको भन्दा पनि गाह्रो छ ।
यही बिचमा क्यानडामा नेपालबाट कलाकारहरु लगेर अवार्ड गर्नु कम चुनौतीको काम भने पक्कै होइन । पहिलो पटक अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हुन लागेको यो अवार्ड २०१७ को जनावरीमा हुने तयारी भइरहेको छ । “नेपालमा आयोजना हुने अवार्डहरु निपष्क्ष नभइरहेको अबस्थामा तपाईहरुले आयोजना गर्न लागेको अवार्ड चाहिँ कसरी निष्पक्ष हुन्छ ?” भन्ने हाम्रो प्रश्नको जबाफ दिँदै क्यानडाबाट आयोजक संस्था अध्यक्ष सुदर्शन गौतमले भने —“हामीले अनलाइन र भोटिङ्ग सिस्टम सुरु गर्नेछौ । जनताले जसलाई भोट गरेर जिताउनु हुनेछ त्यही नै बक्स अफिस फिल्म फेयर अवार्डको विजेता बन्नु हुनेछ ।
“नेपालबाट बढि भन्दा बढि कलाकारहरु ल्याएर अवार्ड गर्नु हाम्रो उद्येश्य हो र क्यानडा सरकारसँग भिषा सहजका लागि हाम्रो कुरा हुँदैछ”, सुदर्शनले क्यानडाबाट भने । “भर्खरै सम्पन्न कलाकार संघद्वारा आयोजित फान अवार्डलाई कसरी लिनु हुन्छ ?” हाम्रो प्रश्नको उत्तर दिँदै सुदर्शनले भने —“संसारभरीका कुनै पनि अवार्डहरु पूर्ण रुपमा सन्तोषजनक रहेको मैले पाएको छैन ।
चलचित्र कलाकार संघ भनेको चलचित्रक्षेत्रमा लाग्ने कलाकारहरुको हकहितका लागि लड्ने संस्था हो र यस्ता संस्थाहरुले अवार्ड जस्तो सानो तिनो कुराहरु आयोजना गरेर कलाकार— कलाकार बिच मतभेदको स्थिती बनाउनु राम्रो होइन । कलाकारहरुको समस्याको समाधानको मुखपत्र बन्न सक्नु पर्छ, चलचित्र क्षेत्रलाई अन्तरािष्ट्रय बजारमा पुराउने पहल गर्नुपर्छ, पहिलो त नेपाल सरकारबाट फिल्म उद्योगको रुपमा रुपान्तरण गराउनु पर्छ । खोइ त ? अहिले कलाकार संघले चलचित्रको अन्तराष्ट्रिय समस्यालाई ध्यान दिनु पर्छ कि अवार्ड गरेर विवादित ।
म जानेर वा अन्जानमा नेपाली फिल्मसँग आबद्ध हुन पुगे त्यसैले पनि यो क्षेत्रको माया लाग्छ र अब यो क्षेत्रलाई अन्तरािष्ट्रयकरण गर्न मैले पनि सक्दो प्रयास गर्नेछु ।” अहिले नेपाली विश्वबजारमा पुराउन आबश्यक रहेका कारण यो अवार्ड एतिहासिक हुने उनले हामीसँगको कुराकानीको क्रममा बताए । “हामीले अवार्डका लागि नेपालबाट कलाकार ल्याउँदा काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलमा र क्यानडाबाट नेपाल फकर्दा क्यानडा विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेललनको आयोजन गर्नेछौ । कोही पनि कलाकार वा पत्रकार क्यानडामा गैरकानुनी रुपमा बस्न पाउँदैनन् किनकी हामीले त्यही अनुसार “इमिग्रेशन बोर्ड अफ क्यानडा” सँग कुरा गरेका छौ”, सुदर्शनले भने ।
नेपालबाट यस अवार्डको संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालेका पत्रकार आर.के. सुवेदीले अर्को महिनाबाट नोमिनेशनको काम सुरु गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार अवार्डमा सहभागी हुन नेपालबाट चलचित्रकर्मी र पत्रकारहरुको भब्य सहभागीता रहनेछ ।